Article – Openmind 360° digital creative agency
Keep promise is key of success
ဝယျယူသူတှကေို ကတိတညျပေးတာဟာ အောငျမွငျတဲ့စြေးကှကျတဈခု ဖွဈစပေါတယျ လို့ ပွောရငျ သဘောတူမှာလား?လူကွီးမငျးရဲ့ ဝနျဆောငျမှု၊ ထုတျကုနျတှကေို ဝယျယူသူတှေ နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ အားပေးဝယျယူနတေယျဆိုတာ လူကွီးမငျးပေးထားတဲ့ ကတိတှကေို ယုံကွညျလို့ပါ။ဒါဆိုရငျ စောငျ့တညျနိုငျမယျ့ကတိတှကေို အစီအစဉျတကြ ခမြှတျရမယျ့အပွငျ ဒီကတိအကွောငျးကို ဝယျယူသူတှေ ...
Trend news from facebook in Myanmar
တဈခြို့သော အကွောငျးအရာတှနေဲ့အတူ မွနျမာပွညျသား Facebook new feeds တှမှော ပွောနကွေတဲ့ အကွောငျးလေးတှကေတော့ စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျရဲ့ ၄၁ နှဈပွညျ့ Birthday အကွောငျးလေးပါ။ဟုတျပါတယျ… ခတျေအဆကျဆကျမှာ တေးရေး၊ တေးဆို၊ သရုပျဆောငျ စတဲ့ အမြိုးမြိုးသော ...
How shall we establish our Nation Branding
Branding တွေထဲက အရေးကြီးတဲ့ Nation Branding ကို ဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲ။မြန်မာဆိုတဲ့နိုင်ငံထဲက ထုတ်လုပ်တီထွင်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ကမ္ဘာကသိအောင် ဘယ်လိုပုံဖော်မလဲ။လုပ်ငန်းပိုင်စီးပွားရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းကို နိုင်ငံတွင်းသာမက ကမ္ဘာကြီးထိပါ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ထုတ်ပြနိုင်အောင် ဦးတည်ချက်အမြဲထားရှိရပါမယ်။ဒါ့အပြင် ဒီဦးတည်ချက်တွေကို ...
Is COVID 19 making you worse?
COVID 19 ကြောင့် အရမ်းဆိုးသွားပြီလားထိန်းချူပ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ ဒီလိုကာလအချိန်ကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲ?ဒီအချိန်က Retreat လုပ်သင့်တဲ့အချိန်လား။ ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းလုပ်နေတာ ခနရပ်ထားပြီး ဘာတွေကို ဘယ်လို၊ ဘယ်လောက်ထိ လုပ်ခဲ့ပြီလား။ ပိုကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်ကိုဖော်ဆောင်နိုင် ယခုနည်းလမ်းတွေကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဆက်လုပ်မလဲ။ ဆင်ခြေသုံးသပ်လိုက်ရင်တော့ ...
Nissan Terra SUV Launch
Wanna win your meeting